トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ General rakazaruka-upenyu nepachinko parlors, inoti-ona kuburikidza nenzira
※ pakupedzisira Ndapota kureva sezvo muitiro ari indasitiri yose
nepachinko rinoumbwa mune imwe yemhuka vatengi uye zvitoro kuti kuhwina kana kurasikirwa. Zvisinei, kana iwe nguva dzose kurasikirwa, nekuti vatengi haapindi muchitoro nokukurumidza, nepachinko yokumusoro divi, akadzokorora kana akapora uye kunze, acharamba asina kusunungura mutengi. Munyika yose nzira yakadaro, kana Minukeru yokutanga nguva, iwe wava chikuru kukanganisa mukana kuhwina.
kumwedzi yokutanga, ichava yakasiyana-siyana chitoro. Ini uchida kutanga kuziva, kuti yokutanga chokutambudzika nepachinko yaiitirwa, kwete kuzvipira kuna nyaya, kuti aivabatsira kumativi pakutanga zvipikiri kugadziridzwa, saka kuti bhora asingadi kuderera, chokwadi kuti uyewo kugadziridzwa kumativi zvipikiri zvichava. Kana, simudza kana kudzikisa marongero ari Horukon, hariwaniki kunze, nokuti ROM anoratidzwa, handizivi kuti utariri kunhivi.
Zvisinei, kana kuti chinja ezvipikiri kuva yakawanda kutenderera,, somuenzaniso, zvinosanganisira kutaridza Horukon, nokuwedzera rotari kangani mune ROM, zvichava nyore kuti varove. Zviri, I chinhu kuti nyaya wakaonekwa kubva nepachinko yokumusoro divi kune akadaro ezvinhu. The pfungwa, yeuka.
chinhu inonzi nguva nyaya iri, kunze wokutanga hafu romwedzi, kana kunewo nepachinko yokumusoro yechipiri yezana kupora, pane chokwadi vakutarisire. Saka, kuziva zvechadenga nepachinko yaiitirwa rakavhurika mwaka, edza kunzwisisa upenyu rakazaruka muchitoro Playing wose. Chokutanga, nguva anonzi rakazaruka mwaka, kuuya vakawanda mid-nehasha mwedzi, kwete chete imwe nguva, pane siyana ezvinhu romwedzi, chokwadi, iwo aripo.
Kunyanya chinangwa, kubva chiitiko achibudisa payout, 'That nguva kuti mashomanana anotevera tiri kupfuura yakazaruka. Kana chiitiko ari dud, unogona zhinji kusiya mashomanana chipikiri kuchinja.
Uyezve, kunyange nyaya payout uye mashandiro, rokutengesa uye kwakakomba mubereko sezvo yakarongwa zviitiko, kuitira kukwezva vatengi kurutivi kuguma mwedzi kupora, nekuti pane nyaya nhamba mienzaniso vari sezvazviri yakanaka ezvinhu uye chipikiri kuchinja , Hall pashure chiitiko guru Unofanira kuramba uchichenjerera. Pashure
zviitiko, uye vakadaro akakurumbira yokutevedzera nhasi, kuti mhando vari yakarumbidza, ndinofunga Zvakanakawo pfungwa kupikisa nokuda mukuru wokuti. The oparesheni zvichiitirwa kufurirwa chaizvo okunze. Zuva rakatevera, kana paine for the ekunze akarasika, pane Zvinogoneka kuti kugadzirwa ari kuwa.
Panguva dzakadaro, kana kuva yakavhurika zvishoma mbambo, kunyange kana munhu mukuru marongero ari simba, panenge pakati marongero ndiyewo zvichida kupinda muzvikamu akawanda. Weather zuva zvakaipa chii, kururamisa kudzokera kwete, iwe simba uye uende zvishoma dhituwa, tafura kwadzo zvinowanikwa. Zvadaro, unoda vanonanga pakuguma ndiye yokutsiva zuva Xintai.
Xintai pazuva rokutanga, muna kutarisira Papera kukwezva vatengi rakatevera zuva, pane chitoro kuti ape payout. Kana rakavhurika mwaka iri, unogona yasimbiswa panguva rotational kumhanya pana zviuru Yen. The rotational kumhanya ari Yen chiuru, uye riri mhiri muganhu mutsetse, ndechokuti akavhura kutanga ezvipikiri. Kana nepachinko parlors izvo kuchinjwa Horukon, yave kunzi kana kuchinja guru raparadza mukana. Zuva iro anonzi rakazaruka-upenyu, inenge mitatu nehasha.
akananga akaongorora sei haasi chete kutarisa date Robo kuburikidza sezvo vazhinji nepachinko parlors anogona. Kana, chete muchitoro kuti anenge partnered pamwe mabasa akadai mashoko Robo nzvimbo Seven Zvinogonekawo kuti kutsiva iri basa rakadaro. , Unoda vanonanga pakuguma ndiye yokutsiva zuva Xintai.
akananga akaongorora sei haasi chete kutarisa date Robo kuburikidza sezvo vazhinji nepachinko parlors anogona. Kana, chete muchitoro kuti anenge partnered pamwe mabasa akadai mashoko Robo nzvimbo Seven Zvinogonekawo kuti kutsiva iri basa rakadaro.